Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Bixinta Bixinta Deynta 2022: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Xalaal & Khiyaano | Sida ay u shaqayso
Waxaan aaminsanahay inaad neceb tahay inaad gasho kharashyo aan loo baahnayn gaar ahaan markaad ku jirto miisaaniyad. Markaa, waxaad doorbidi lahayd inaad qiimayso in kharashyadan aysan soo bixin.
In kasta oo aad iska ilaalin karto kharashyada, waxaad sidoo kale badbaadin kartaa lacag sameynta wax fudud sida "gorgortanka".
Haa! Gorgortanka qiimayaasha hoose ee biilashaada waa suurtogal. Taasna waxaad ku samayn kartaa adoo adeegsanaya Trim App.
Laakiin waa maxay Trim App iyo sidee u shaqeeyaa?
Waxaan ku fulin doonnaa Dib -u -eegista Bixinta Bixinta Dhimista ee maqaalkan.
Waa maxay Barnaamijka Bixinta Bixinta Deynta ee Trim?
The Trim Debt Payoff App waa codsi kaa caawiya inaad joojiso rukummadaada aan la rabin oo aad dib uga xaajooto biilashaada qiimo hoose.
Si la mid ah codsiyada maaliyadeed ee shaqsiyeed, Trim Debt Payoff App wuxuu ku xiraa akoonnadaada bangiga akoonno kale oo aad u baahan tahay inaad ku bixiso biilasha.
Sidee ayaa Ma gooyay Lacag Bixinta Deynta App?
Codsiga Bixinta Bixinta Trim waa mid aad u fudud oo si sahlan loo isticmaali karo. Interphase -ku waa mid fudud taas oo u sahlaysa adeegsadayaasha cusub inay wax ka qabtaan.
Barnaamijka Bixinta Bixinta ee Trim wuxuu si fudud ugu xiraa koontadaada bangiga koonto kale oo aad ku sameyso kharashaadkaaga caadiga ah sida koontada gaaska, korontada iwm.
Marka laga reebo inuu kaa caawiyo inaad si fudud lacag ugu keydiso biilashaada, codsigan wuxuu kaa caawinayaa inaad tirtirto rukummada aan la rabin.
Waqtigan xaadirka ah, waxay hormarinayaan arjiga si ay gacan uga geystaan ​​meel -marinta astaamaha fududeeya maareynta lacagta.
Sideen u joojin karaa Diiwaangelinteyda anigoo adeegsanaya App -ka Trim?
Barnaamijka Trim wuxuu u dhaqmaa sida bot maaliyadeed oo kaa caawineysa inaad abaabusho oo aad dib u eegto dhammaan macaamilkaaga.
Inta lagu guda jiro hawshan, waxay iftiiminaysaa macaamil soo noqnoqoshada waxayna kala go'daa. Aaladaha sida Spotify, Netflix, HBO, iyo Hulu ayaa lacagtooda ka sameeya isqoristaas.
Kharashyada kale ee yar -yar ee ciyaaraha fiidiyowga iyo bogagga shabakadaha xubinnimada had iyo jeer waa la iska indho -tiri karaa laakiin Trim ma sameeyo taas
Wuxuu qiimeeyaa ahmiyadda khidmaddan iyo is -qoritaannada iyo sida ay u saameeyaan yoolalkaaga maaliyadeed.
Ka dib markay qiimeyso eedeymaha, waxay kuugu soo bandhigaysaa fayl waxayna ku siinaysaa ikhtiyaarka inaad tirtirto kuwa aan muhiimka ahayn.
Habkan, waxaad kaydsan doontaa lacag badan markay sii wadaan inay ku siiyaan warbixinnada horumarka waqti ka waqti.
Marka, si loo joojiyo rukummadaada adoo adeegsanaya App Trim, Trim wuxuu:
Hel liiska biilashaada soo noqnoqda
U muuji biilasha qaybo kala duwan
Ku siiyo warbixin ku saabsan kharashka aad ku bixineyso biil kasta
Wuxuu ku siinayaa ikhtiyaar inaad wax walba ama qof kasta si gaar ah u baajiso
Waxay kuu soo saartaa warbixin horumarineed si ay kaaga caawiso inaad gaarto go'aano wanaagsan.
Sideen Dib -u -Gorgortan ugu Bixin Karaa Biilashayga?
Dad badan baa gorgortanka ku adkaada. Waan fahamsanahay tan, sidaa darteed, hoosta Dib -u -eegista Bixinta Bixinta Trim, waxaan ku tusi doonaa sida ay u shaqeyso.
Si aad dib ugala xaajooto biilashaada adiga oo adeegsanaya Trim App, waa kan sida aad u samayn karto.
Biil u dhig gorgortanka
Bixi habka lacag bixintaada
Trim wuxuu la xiriiri doonaa biilka
Waxaad heli doontaa ogeysiis ku saabsan natiijada gorgortanka
Trim wuxuu kaa qaadayaa lacag adeeg
Guud ahaan, Trim waxay ku dallacdaa qiyaastii 33% kaydkaaga sannadlaha ah si ay kaaga caawiso dib -u -gorgortanka. Sidaa darteed, haddii aad ku kaydiso $ 10 qorshahaaga korantada, waxay noqonaysaa $ 120 oo macnaheedu yahay Trim ayaa kaa qaadi doona $ 40.
Akhri wax dheeraad ah: 17 Fikrado Qurux Badan oo Lagu Bixin Karo Deynta Si ka dhakhso badan sidii hore
Maxaan u baahanahay inaan ka ogaado Trim Premium?
Barnaamijka Trim wuxuu leeyahay astaamo qaali ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha si ay uga helaan astaamo badan dalabka. Waxaa jira astaamo badan oo la yimaada koonto qaali ah Trim, si kastaba ha noqotee, waxaan iftiimin doonaa kuwa muhiimka ah.
Kaydinta fudud ee koontadaada Trim ayaa kuu fududaynaysa inaad lacag keydsato. Mar kasta oo aad hesho dakhli, qaddar lagu heshiiyay ayaa isla markiiba laga saaraa kaydinta.
Markaad keydiso $ 2,000 ee ugu horreeya, waxaad helaysaa abaalmarin 4% ah sannadka koowaad kadib. Markaa waxaad helaysaa 11% sannadkaaga koowaad kadib.
Muuqaalka TrimPay wuxuu kaa caawinayaa inaad ka saarto deymaha kaarkaaga deynta oo wuxuu u shaqeeyaa si gaar ah:
Waxaad dooranaysaa kaarka deynta ee aad rabto inaad iska bixiso
Samee wareejinta bangi toddobaadle ah oo otomaatig ah koontadaada TrimPay (kani waa koontada keydka)
Dooro maalin ka mid ah bisha si lacagta dhammaystiran ee koontadaada TrimPay loogu diro shirkadda kaarka deynta
TrimPay wuxuu ku shaqeeyaa hal kaar oo amaah ah mar kasta.
Adigoo ah isticmaale qaali ah, waxaad marin aan xad lahayn u leedahay koox xooggan oo qorsheeyayaal maaliyadeed. Wax kasta oo su'aalo ah oo aad qabto oo ku saabsan bixinta daynta, kaydinta ama miisaaniyadda, way ku caawin doonaan.
Xisaabiyeha deynta ayaa ah qayb aad u xoog badan oo ka mid ah qorshaha caymiska. Dib -u -eegista Bixinta Bixinta Lacagta ee Trim ma dhammaystirmi doonto iyada oo aan laga hadlin xisaabiyaha.
Shaqadu runtii waa mid sahlan: waxay kaa caawineysaa inaad isku xirto akoonnadaada oo dhan waxayna abuurtaa qorshe lacag -bixin oo leh dulsaar yar dhammaan deymahaaga.
Kooxda Trim waxay la xiriiri doonaan bangigaaga si ay ugala hadlaan suurtogalnimada inay kuu abuuraan qorshe keydin ama dib -u -gor -gortan lacag -bixinnadaada.
Dhab ahaantii Trim ma Muhiimbaa?
Haddii aad aad ugu fiican tahay gorgortanka iyo miisaaniyadda, waxaad la yaabi kartaa haddii barnaamijka Trim uu dhab ahaantii muhiim yahay.
Maahmaah hore ayaa micneheedu yahay “khad daciif ah ayaa ka fiican xusuusta ugu fiiqan”. Marka, macno malahan sida aad u abaabulan tahay, waxyaabaha qaarkood ayaa maskaxdaada ka boodi doona.
Barnaamijka Trim wuxuu ballan qaadayaa qiimo aad u badan in kasta oo uu leeyahay waxyaalo xun.
Faa'iidooyinka barnaamijka Trim waxaa ka mid ah:
Astaamaha bilaashka ah, gorgortanka biilka, iyo joojinta rukummada
Si sahlan loo isticmaali karo interface.
Awood kaydinta lacagta
Dhinaca kale, qaar ka mid ah qasaarooyinka barnaamijka Trim waxaa ka mid ah:
Ma jiro qalab maalgashade
Ma laha sifooyin dejin hadaf
Isbarbar dhig cad ayaa ku tusaya in faa'iidooyinka ay ka weyn yihiin khasaaraha. Barnaamijka Trim waa bilaash marka laga reebo inaad rabto inaad kor ugu qaaddo koontada lacagta qaaliga ah $ 10 bishii.
Sideen Ku Helaa App -ka Trim?
Waxaad ka heli kartaa barnaamijka goosashada Google Playstore iyo dukaanka App.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad booqato websaydhka si aad u bilowdo hawsha.
Fikradaha kama dambaysta ah ee ku saabsan Dib -u -eegista Bixinta Deynta
Dib -u -eegista Bixinta Bixinta Dhimista oo dhammaystiran, waxaan aaminsanahay inaadan ka heli doonin app -ka oo dhan.
Trim wuxuu runtii ka caawiyay dadka inay keydsadaan lacag oo ay ku noolaadaan nolol wanaagsan.
16 Barnaamijyada TGI ee ugu Fiican Jimcaha aan dhamaadka lahayn | $ 10 Cunto -yaqaanka
Tgi Fridays Aan End Apps 2021 ayaa bixiya qiimo dhimis heersare ah oo noocyo kala duwan ah. Waxaan kuu sameyneynaa…
Maaraynta maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed maaha inay ku saabsan tahay rasiidhada iyo xaashiyaha. Waxaad ku fududayn kartaa habka oo dhan adigoo isticmaalaya…